Tontolo_iainana · Oktobra, 2008 · Global Voices teny Malagasy
Tontolo_iainana · Oktobra, 2008
Tantara mikasika ny Tontolo_iainana tamin'ny Oktobra, 2008
Karaiba 21 Oktobra 2008
“Nampitoka-monina ny tanàna kely sy lehibe maro sy nahatonga fialana tamin'ny toerana iva, nanimba ny voka-pambolena sy fikatonan'ny sekoly maro any amin'ny faritra afovoany sy andrefan'i Belizy ny fitondrahan'ny rano (raiso amin'ny teny hoe tondra-drano) tany amin'ity firenena ity…”: hoy Belizean namelabelatra tamin'ny antsipiriany.
Syria: Efa tonga ve ny ririnina?
Syria 21 Oktobra 2008
Ho avy ity ny ririnina, hoy ny mpamaham-bolongana Syriana Sasa. Taorian'ny fidanihan'hafanana (ka mitanika orana koa!) dia nirotsaka tampoka tao an-drenivohitra Syriana ny oram-baratra. “Ka tokony haka ny akanjo fanao amin'ny ririnina ary isika sa tsia?” hoy ny fanontaniany.
Nosy virijiny amerikana: Taorian'i Omar
News of St. John no mamoaka sary vitsivitsy maneho ny nosy taorian'ny fandalovan'ny rivodoza (Hurricane) Omar.
Sri Lanka: Samy simba izany e!
Sri Lanka 16 Oktobra 2008
Portrait no mitatitra ny fanimbana ny ala amina kilaometatra maromaro any Sri Lanka izay notapatapahina, nodorana, nohosihosena sy nentin'ny bulldozer fa nolamahina anjatony metatra ny andaniny sy ny ankilan'ny lalana ho fepetra noraisin'ny tafika hisorohana ny fanafihan'ny Tigra Tamolona miafina ao anaty ala ao.
Bahrein : Tendrombohitra any Ecosse sy any Omana
Angletera 02 Oktobra 2008
BuZain mpiblaogy avy any Bahrein no manao fampitahana ara-tsary ny mahasamihafa ireo tendrombohitra any Ecosse sy any Omana. Ato jerena raha tianao ho fantatra izany fahasamihafana izany.